Ihlanganiswe engilazini, lokhu kuphuma kukagesi kunikeza amandla mahhala - Afrikhepri Fondation
Inamathele efasiteleni, le ndawo kagesi inikeza amandla amahhala
WI-indow Socket ingumqondo wababili baseNingizimu Korea, iBoa Oh neKyuho Song. Lo mqondo omusha, osekuyisibonelo kuphela, uvumela le ndawo kagesi ukuthi inanyathiselwe efasiteleni noma kunoma yikuphi okunye ukwesekwa ukuxazulula izinkinga zokuvuselela ibhethri. Lesi isitolo sikagesi esilingana ephaketheni esingathathwa noma yikuphi ukushaja amagajethi wethu wemihla ngemihla.
Iwindi Socket kulula ukuyisebenzisa. Kuyindlela kagesi ephathekayo esebenza ngokuzimela, ngoba ihlanganisa amaphaneli elanga amancane. Ngakho-ke le nto yenza ukuthi ikwazi ukugcwaliswa kabusha izinto zansuku zonke kusetshenziswa amandla elanga. Ukuqanjwa okuzokhulunywa ngakho maduzane.
Lo mqondo omuhle usivumela ukuthi sisebenzise ugesi ngokuhlukile.
Iwindi Socket lifana kakhulu namaphaneli we-photovoltaic esazi kahle. Le nkampani yenza kube nokwenzeka ukusebenzisa nokuhlomula kugesi mahhala ngokumane unamathisele ucingo ewindini. Ngenxa yamaseli alo ahlanganisiwe elanga abekwe ngemuva kocingo, isokhethi elizimele lizobe selithatha amandla elanga ukuze liguqulwe libe ugesi, livumele noma iyiphi into ukuthi ivuselelwe.
Ngokuya ngokuhlola kwabo, kuzothatha Amahora ama-5 kuya kwangu-8 webhethri elitholakala ngaphakathi lishajwa kuze kufike ku-1000 mAh. Ngempela, okwamanje, amandla eSocket Socket alingana no isigamu AA ibhethri. Ngaphandle kwalokhu, ukusungulwa kuyathakazelisa futhi kungenza ukuthi kube lula ukuxazulula inkinga uma kukhona amandla.
Uma sikholelwa ezinye izifundo, inani lelanga esilitholayo emhlabeni liphindwe izikhathi ezingama-3000 kunezidingo zethu zansuku zonke. Ezinye izindlela zikhona kuzo zonke izindawo, sekuyisikhathi esihle sokusiza lolu hlobo lwephrojekthi ukuthi lubone ukukhanya kosuku. Njengoba intengo kagesi inyuka njalo ngonyaka, sekuyisikhathi esiphezulu ukuthi lokhu kusungulwa kwenzeke.
Izizwe zaseNigro kanye namasiko